Ardayda shisheeye oo ku sii yaraanaya Jaamacadaha USA, siyaasadaha Trump dartood – Kasmo Newspaper
Ardayda shisheeye oo ku sii yaraanaya Jaamacadaha USA, siyaasadaha Trump dartood
Updated - November 14, 2017 11:05 am GMT
London (Kasmo), Tirada ardayda cusub ee Jaamacadaha Maraykanka ayaa hoos u sii socota, iyada oo hoos u-dhaca is-diiwaangalinta sannadka waxbarashada ee cusub gaaray 7%, taas oo 45% laga dareemay goobaha waxbarashada.
Tuhunku wuxuu yahay in siyaasadaha ku wajahan soo-galootiga ee Maamulka Trump u xishay ayan dhiirri-galinayn codsiyada, halistuna waa Maraykanka oo luminayaa gacantii sare “Soft power” iyo awooddii soo-jiidashada dadka hibada leh ee dunida.
Qayladhaantu waxay ka soo baxday warbixinta Machadka “Institute for International Education” ee maamula helitaanka Jaamacadaha Maraykanka ee ardayda shisheeyaha, marka dambana qiimeeya ka-qaybgalkooda hawlaha aqoonta.
Hoos u-dhaca is-diiwaangalinta ardayda shisheeyaha waxay u badanyihiin dalalka Sacuudi Carabiya iyo Brazil, waana xaqiiqo juqraafi ahaan iyo dhaqan ahaan kala fog isla markaana kala duwan. Taas oo ifafaalaha ka dhigaysa mid baahsan halkii uu, tusaale ahaan, ku koobnaan lahaa oo qur ah dalalkii la saaray xayiraadihii soo-galootiga ee Maamulka Trump.
Sannadkii 2016/17 Maraykanka waxaa soo galay 1,08 malyuun oo arday shisheeye, 3% kororsiimo dhan, laakiin baaxadda waxa dhacay sannadka 2017/18 wuxuu leeyahay walaac.
Maraykanku wuxuu waligii, ardayda shisheeye ku dhiirrigalin jiray deeqaha waxbarasho ee barnaamijka “Fulbright Program” oo dagaalkii 2aad ka dib, sababo kala duwan dartood, loo maalgaliyay.
Ujeeddada 1aad waa soo-jiidashada dadka hibada leh ee dunida iyo in ay dalka dagaan, haddii ay aqoon muhiim ah ku soo kordhinayaan mihnadahooda gaarka ah: waxaa tusaale ku filan liiska abaalmarinta Nobelka Maraykanka, oo run ahaanti ku wada dhashay dibadda dalka.
Midda 2aad waa xoojinta xiriirka, isku xirka ardaydaan oo markii ay dalalkooda dib ugu laabtaan ka qaybgalaya hawlaha siyaasadda, aqoonta iyo meheradaha kale, iyaga oo saaxiibbada Maraykanka ah.
Midda 3aad waa xaqiijinta hormuudnimada “Soft power” Maraykanka ee ku baahaysa dunida, taas oo loo sii xambaarinayo dhallinyarada dal kasta iyo dhaqan kasta.
Midda 4aad waa u suuragalinta Kulliyadaha in uu soo galo dakhli gaaraya $ 39 Bilyan oo Dollar sannadkii oo shisheeye ka soo xerooda. Arrimahaan oo idil waxay muddo dheer gacan ka soo gaysteen sidii Amerika u ahaan lahayd mid weyn, in ay lumisana waxaa ugu sugnaan doonta khasaare aan laga soo kaban Karin.